गायक बन्न राजधानि आएका सरोज कसरी बने चर्चित समाचार वाचक ? | www.aagopati.com Websoft University
गायक बन्न राजधानि आएका सरोज कसरी बने चर्चित समाचार वाचक ?
काठमाडौ २४,बैशाख । सुरुङ्गा घर भएका गायक तथा समाचार प्रस्तोता सरोज कोइराला यतिखेर चर्चा बटुलिरहेका छन् । २०५८ सालमा काठमाडौ गएर गायक बन्छु भनेर घरबाट हिडेका थिए । गाउमा बादल बजाउनेका रुपमा चिनिदै आएका सरोज गीत गाउछ भन्ने घर परिवार बाहेक कसैलाई थाहा थिएन रे ? सरोज भन्छन् गाउमा हुने कार्यक्रम र देउसी भैलोमा भने मादल बजाउन सक्रिय हुन्थे ।
गीत भने घरैमा लुकेर गाउने गर्थे र घर परिवार बाहेक कसैलाई थाहा हुर्दैन थ्यो । गायक बन्न रहर र सोच बनाएर आएका उनले २०५८ पुसबाट साधना कलाकेन्द्रबाट बरिष्ठ संगीतकार प्रकाश गुरङबाट सगीत क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । गायन यात्रालाई अगाडी बढाउन उनि राजधानी आए तर राजधानीमा टिक्नको लागी जागिरका खोजिमा निस्किए । जागिरका ।सिलसिलामा उन्ले एप्लाई गर्न कुनै ठाउँ बाकि राखिन सरोजले भने । स्कुलमा पढाउने काम पनि गरे । त्यस्तै “थोरै भए पुगि सरि ”मा मा एक भाग अभिनय समेत गरे । उन्को अभिनय मन परेका कारण निर्देशक सविन बास्तोलाले फेरि बोउछु भनेका थिए रे । उन्ले जागिर खान विभिन्न रेडियोमा एप्लाई गरे तर उन्लाई धेरै रेडियोले अस्वीकार गर्यो । जागिर खाने सिलसिलामा उनि समाचार बाचक बन्नु परेका बताउछन् ।
रेडियो सिटीमा खुलेको भ्याकेन्सीमा एप्लाई गरे र कडा परिश्रम गरेर पहिलोमा नाम निकाले र त्यहि काम गर्न थाले । त्यस पछि उन्लाई गायनमा आउन सजिलो भयो । २०६९ सालमा उनले पहिलो एल्वमका रुपमा सगुन भन्ने जसमा सुरेस अधिकारी, गैरे सुरेस ,महेश खड्का,अर्जुन पोखरेलले संगीत गरेका छन् । डा. कृष्ण हरि बराल महेश खड्का लगाएतको शब्द रहेको छ । त्यस्तै भर्खरै पुष्पा खनाद्धारा लिखित त्यो आखाको पानीलाई कुन छाताले छेकु म गीतलाई आफै कम्पोज गरेर गाएका छन् । जुन निकै चर्चामा रहेको पाइएको रहेको छ भने हाल उनि एकल एल्वमको तयारीमा समेत जुटेका छन् ।